Wasiirka Dakadaha, Gaadiidka cirka iyo dulka oo ku amray Maareeyaha Dakada inuu soo wareejiyo fruaha xafiiska iyo Sayid Cali oo ku gacanseyray (Warbixin)
Fadhi ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho Wasiirka Dakadaha, Gaadiidka cirka iyo dhulka Dowlada KMG iyo Maareeyaha Dakada Muqdisho Sayid Cali ayaa ku dhamaaday muran iyo hanjabaad.
Wasiirka gaadiidka Aadan Cabdullaahi Aadan ayaa maanta ugu yeeray xafiiskiisa maareeyaha dakada isaga oo ka dalbay inuu ku wareejiyo xafiiska maareeyaha cusub ee uu dhawaan soo magacaay Ra’isulwasaaraha.
Ilo wareedyo ku dhaw dhaw xafiiska wasiirka dakadaha oo diiday in aan magacooda soo xigano ayaa u xaqiijiyo Midnimo.com, in Sayid Cali maareeyaha Dakada Muqdisho uu ka madax ku gacan seeray amarka wasiirka isaga oo u sheegay in xilka uu uga dagi karo dikareetada madaxweynaha.
Wuxuu sheegay in marki hore uu magacaabay Madaxweyne Sheekh Shariif haatana uu xilka ka qaadi karo madaxweyne Shariif, waxa kale oo uu waxba kama jiraan ku tilmaamay xil ka qaadisti uu ku sameeyey Ra’isulwasaaraha.
Sida ay wararku sheegayaan muranka dhex maray maanta Wasiirka Dakadaha iyo gaadiidka iyo maareeyaha dakada ayaa gaaray in ay labada dhinac isu dhaartaan oo ay isu hanjabaan, iyadoo wasiirka uu ku adkeysanayo in xafiiska uu xoog uga baxayo maareeyaha, halka Sayid Cali uu sheegay in aysan jir cid xoog uga saari karta.
Qadiyada Dakada Muqdisho ayaa murugsaneyd bilooyinki ugu danbeeyey, marki hore waxay u dhaxeysay maareeyaha dakada iyo qaar ka mid ah saraakiisha iyo xamaaliga dakada, hase yeeshee haatan waxaa ku loolamaya madaxda dowlada gaar ahaan madaxweynaha iyo ra’isulwasaaraha.
Dadka sida aadka ah ula socda arinta Dowlada KMG Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweynaha iyo ra’isulwasaaraha ay ku loolamayaan dakada magaalada Muqdisho oo midba uu rabo inuu halkaasi u joogo qof uu isagu magacaabay.
Sababta ugu weyn ee ay ugu loolamayaan ayaa ah iyadoo haatan lagu jiro waqtigi ololaha doorashooyinka madaxtinimo ee Soomaaliya oo la filayo in ay bilowdaan bisha August, marka dhaqaalaha dakada ayaa ah mid muhiim u ah labada dhinac cidi ku guuleysata maareeyaha xafiiska ku fariisto.
Dhawaan Ra’isulwasaaraha Soomaaliya, Cabdiwali Maxamed Cali ayaa xilka ka qaaday maareeyaha dakada, isaga oo xilkaasina u magacaabay Cabdulaahi Cali Nuur.